कसरी एक कम्पनी सोशल मीडिया मा डुबकी लगाउनु पर्छ? | Martech Zone
बिहीबार, अगस्ट 21, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो part भाग श्रृंखलाको भाग २ हो। भाग १ थियो जब एक कम्पनी को सामाजिक मीडिया मा डुबकी लगाउनु पर्छ? यस पोष्टमा ढिलाइका लागि माफ गर्नुहोस्, यो काममा एक हप्ता भइरहेको छ - projects परियोजनाहरू नजिक आउँदैछन्, ती मध्ये एक निर्माणमा एक बर्षमा!
पहिलो पोस्टको वरिपरि त्यहाँ केही ठूलो छलफल भएकोले मैले रोकें, विशेष गरी एमा दीप टेक डाइभमा मानिसहरूबाट पोष्ट गर्नुहोस्:
तर म डगको यो दावीलाई प्रश्न गर्छु कि तपाईले सर्वप्रथम तपाईको कम्पनीमा सबै नेताहरुलाई संलग्न गर्नु पर्छ? निगमको रणनीति स्वामित्व लिनेहरू। सायद इन्डियानापोलिस बिभिन्न ग्रहमा छन् (जेफ, तपाई केन्टकी हुनुहुन्छ, तपाई के सोच्नुहुन्छ?) जहाँ कार्यकारी टोलीसँग कुम्बाया पुग्न सोशल मिडियाको समय र समझ छ। तर यहाँ, नयाँ संचार पहललाई मार्न सब भन्दा द्रुत तरीका भनेको यसलाई शीर्ष-तहको सहमतिमा बंधक बनाउनु हो। कि नेतृत्व अनुमोदन महत्त्वपूर्ण छैन, तर यो प्राप्त गर्न लगभग असम्भव छ, विशेष गरी तपाईं कुनै पनि ठोस ROI देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दा पहिले।
सायद मेरो पोष्टमा यसमा छाप छोएको छु: म बोर्डरूम स्तरमा सहमति निर्णय लिने बारेमा चिन्तित छैन। के मसँग साँच्चै चिन्तित छु कम्पनीको नेतृत्वलाई अवसर र पासोहरू चिन्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ जुन तपाईंको रणनीतिमा तपाईंको व्यवसाय खोलेर उत्पन्न हुन्छ। लेखक जारी राख्छ:
एक सुरु-सानो रणनीति कहिलेकाँही राम्रो काम गर्दछ, विभिन्न तरिकाहरूमा। तपाईलाई सबै आवश्यक छ एक उद्यमी लेखक, केहि धेरै सस्तो उपकरणहरू, र एउटा सञ्चार समस्या जुन तपाईंले नाप्न सक्नुहुन्छ। सायद यो तपाइँको वेब साइट मा अधिक यातायात प्राप्त को रूप मा आधारभूत हो। वा नयाँ समर्थन सामग्री र कार्यक्रमहरूको सचेतना जगाउँदै। वा कसरी वास्तविक व्यक्तिहरूले तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रयोग गर्दै छन् भन्ने बारे रोचक anecdotes बताएर ग्राहकहरूको रुचि विस्तार गर्दै।
जबकि म स्वीकार गर्दछु कि यसले तपाईंको कम्पनीलाई द्रुत सुरुवात र 'ब्ल्याक होल कमिटी' मा पुग्ने पर्याप्त समय नभएको आपूर्ति गर्दछ, मैले यो दृष्टिकोण दुबै उत्कृष्ट र विनाशकारी परिणामहरू देखेको छु। हुनसक्छ मैले यो रणनीति देखेको सब भन्दा राम्रो उदाहरण साथी हो क्रिस बगगटमा ब्लग छ ईमेल मार्केटिंग उत्तम अभ्यासहरू। अवश्य पनि, क्रिससँग एक्क्सैक्टरेटको मालिक र चीफ मार्केटि Officer अफिसर दुबै भएको फाइदा थियो, त्यसैले त्यतिबेला पछाडि जानु अलि सजिलो थियो।
प्रश्न यो छैन कि क्रिसको ब्लगमा प्रभाव थियो। यसले अविश्वसनीय प्रभाव पा !्यो! प्रश्न यो हो कि यो आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्यो र यसले व्यापार प्रभाव पार्‍यो, संगठन-व्यापी, त्यो हो सकेजति छ क्रिस छोडियो ExactTarget सुरु गर्न कम्पेन्डियम ब्लगवेयर (अस्वीकरण: मैले क्रिसलाई मूल अवधारणा विकास गर्न मद्दत गरें) किनकि उनले यो पनि कल्पना गरेका थिए!
क्रिसले धेरै वर्ष टाईप्याडमा ब्लगिंगको डोरी सिके। क्रिसले खोज इञ्जिन मार्केटि,, एकीकरण, इत्यादिमा ब्लगको सम्भाव्यता पत्ता लगाएको समय बितिसके पछि ढीलो भइसकेको थियो। Typepad र ब्लगिंग माध्यम को पूरा लाभ उठाउनुहोस्। ऊ जताततै ब्याकलि .्क गरिएको थियो (ऊ अझै पनी # १ को लागि हो ईमेल मार्केटिंग उत्तम अभ्यासहरू“। त्यहाँ केहि दर्जन अन्य सर्तहरू थिए जुन क्रिसले एक्सेक्टरेटमा सीसा पुस्ताका लागि सम्बद्ध गर्न मनपराउँदछन्, तर उनीसँग कुनै त्यस्तो तरीका छैन जुन त्यो दिन उसले भर्खरै उफ्र्यो र ब्लगि started गर्न थाल्यो। उसले पनि संस्था ब्लगमा अन्य मानिसहरूलाई पनि मन पराउँथ्यो - प्रभावलाई कम्पाउन्ड गर्न।
तिमीलाई कसले भनेको छ?
यसैले म तपाईंको व्यवसायको लागि सही सामाजिक मिडिया सल्लाहकारहरू खोज्ने यति विशाल वकिल हुँ। एक महान परामर्शदाता तपाइँका उपकरणहरू, तपाइँको व्यापार र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ उपयुक्त उपकरणहरू जुन तपाइँको रणनीतिमा मिल्नेछ। स्थानीय सामाजिक मिडिया परामर्शदाताहरु पनि सामाजिक मिडिया परिदृश्य बारे सचेत छन् - र तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ जहाँ तपाइँको रणनीति कार्यान्वयन गर्न, कसरी होइन।
तपाईंको IT मान्छे हुन सक्छ WordPress minutes मिनेटमा चलिरहेको छ (प्रख्यात १-क्लिक स्थापना)। के यसको मतलब उसले खोजी ईन्जिन क्रोलरहरूको लागि तपाइँको विषयवस्तु कसरी निर्माण गर्ने भनेर जान्दछ। के उसलाई थाहा छ कि अधिकतम प्रभावको लागि कसरी permatinks र पृष्ठ शीर्षक लेआउट गर्न। के उसलाई थाहा छ प्लगइनहरू कस्ता हुनुपर्दछ? होईन, उसले गर्दैन - अन्यथा ऊ एक सफल ब्लग चलाइरहेको छ, बोल्दै, र पक्षमा परामर्श। यो ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जहाँ तपाईं ओपन सोर्स स्प्रिटबाट पूरै बेकार हुन सक्नुहुन्छ।
मलाई खुला स्रोत मन पर्छ! मलाई WordPress मन पर्छ! के म यसलाई कर्पोरेसनको लागि व्यापक सामाजिक मिडिया रणनीति सुरू गर्न प्रयोग गर्दछु? होईन। WordPress एक लेखक केन्द्रित सामग्री प्रबंधन प्रणाली हो, एक उद्यम कम्पनी केन्द्रित सामग्री प्रबंधन प्रणाली हैन।
तपाईंको कम्पनीको आवाज को हो?
अक्सर, तपाईंको मार्केटिंग विभाग एक सामाजिक मिडिया रणनीति कार्यान्वयनको लागि तपाईंको उत्तम संसाधनहरू होइनन्। बजारहरू उत्सुक समूह हो। हामी हाम्रो खुट्टा मा सोच्दछौं र हामी अक्सर जब हामी कुरा गर्छौं दिमागमा समग्र ब्रान्ड रणनीति छ। यदि तपाइँ एक सामाजिक नेटवर्क प्रविष्ट गर्नुहोस् र सामान्यतया लिंगो स्लिंग गर्न सुरू गर्नुहोस् बीएस बिंगो को लागी आरक्षित, यो एक स्वचालित हो F। यदि तपाइँलाई छाड्न भनिएन भने, तपाइँको कम्पनीले सामाजिक मिडिया - ट्रस्टको मूल सिद्धान्तको उल्लंघन गरेकोमा सार्वजनिक रूपमा हैरंग गर्न तयार हुनुहोस्।
तपाईंको संगठनमा अहिले नै व्यक्तिहरू छन् जसले विश्वास, अख्तियार, र तिनीहरूको उद्योगमा विशाल नेटवर्क निर्माण गरेका छन्। ती कनेक्टरहरू र प्रभावकारहरू हुन् जुन तपाईंले आफ्नो रणनीतिमा भर्ती गर्न आवश्यक छ!
एउटा मात्र नखाऊ!
कसरी सुरू गर्ने भन्नेमा अन्तिम बिन्दु। कृपया तपाइँको सबै विश्वास एकल 'विशेषज्ञ' मा नराख्नुहोस्। विज्ञ एक सर्त हो जुन विशेष गरी सामाजिक मिडियाको सम्बन्धमा हो। कम्पनीहरूले अहिले सतहलाई स्क्र्याप गरिरहेका छन् कसरी यस अविश्वसनीय माध्यमको लाभ उठाउनको लागि र उनीहरूको कम्पनीहरूका लागि सम्बन्धहरू र फेडिबिलिटी निर्माण गर्न। कहिले पनि, सबै, कुनै पनि होइन, सबैजना जस्ता चरम सर्तहरूदेखि सावधान रहनुहोस् ... रणनीति तपाईले शर्त नराख्नु होला तपाईको सब भन्दा ठूलो जीत हासिल गर्नका लागि।
केहि सामाजिक मिडिया परामर्शदाताहरू, व्यक्तिहरू जसले तपाईंको व्यवसाय, तपाईंको उद्योग, तपाईंको विपणन रणनीति, तपाईंको प्रविधि अपनाउन सक्छन र जसले यो नेतृत्व नयाँ टीममा तपाईंको नेतृत्व टीमलाई शिक्षा दिन सक्छन् बुझ्न सक्दछन्।
कहिलेकाँही तपाईं पर्याप्त तयारी गर्न सक्नुहुन्न
डिसेम्बर १, २०१ 15 2008:२:3 अपराह्न
डग, हामी तपाईंको श्रृंखलाको अर्को किस्तमा देखी खुशी छौं। व्यवस्थापन सहमति बारे हाम्रो चिन्ता सम्बोधन गर्न को लागी धन्यवाद। हामी यस कुरामा सहमत छौं कि विशेषज्ञहरू बारूदी विस्फोटनबाट रोक्न र अवसरहरू अवसरका लागि महत्वपूर्ण छन्। यो हाम्रो गहिरो प्रविधि भीडको लागि उत्कृष्ट विषय हो, त्यसैले हामी हौं श्रृंखलाको हाम्रो कभरेज जारी राख्दै म्याकब्रुब्लगमा। हामी भाग to को लागि तत्पर छौं! - डेभिड